खाली पेटमा नखानूस् यी १० खानेकुरा, ‘वि’ष’ बन्न सक्छ ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यखाली पेटमा नखानूस् यी १० खानेकुरा, ‘वि’ष’ बन्न सक्छ !
काठमाडौं, संसारका आधाजसो मानिसहरु खान नपाएर भन्दा खान नजानेर विभिन्न खाले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या झेल्दै आएको बिभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी खाएको खानेकुराले शरिरलाई सञ्चो त गर्दैन नै त्यो खानेकुरा शरीरको लागि वि’षसरह बन्छ ।कुन खानेकुरा कुन समय, कति, कसरी र कस्तो अवस्थामा खाने भन्नेमा ध्यान दिनसके मानिसको स्वास्थ्य धेरै राम्रो हुन्छ। मानिस नि’रोगी बन्छ। बिहानै खाली पेटमा दूध हालेको चिया खानुहुन्छ भने यस्तो बानी त्या’ग्नुहोस् ।दुध चियाले तपाईंको पेटमा ग्याँ’स्ट्रिकको स’मस्या असाध्यै बढाउँछ ।
बिहान मनतातो पानी, वा अघिल्लो दिन तामाको भाडा वा विजय सालको काठको ठेकीमा राखिएको पानी स्वास्थयका लागि निकै श्रेयकर हुन्छ । चिया नै नपिई हुँदैन भ’नेब्ल्याक टि वा ग्रीन टी पिउनु राम्रो हुने चिकित्सकको सुझाव छ ।तपाई ब्रेकफास्टमा बिहानै खालीपेटमा मसलेदार स्पाईसी वा धेरै पिरो खानेकुरा खानुहुन्छ भने स्वास्थमा निकै ठूला स’मस्या देखिन्छ । बिहान तपाईले लिनुभएको यस्तो ब्रेकफास्टले पुरै दिन तपाईको पेटमा ए’सिडिटी बनाउँछ । चिकित्सक भन्छन्, दिनभरी ड्या’उ आउने, अपाच्य भएजस्तो हुने, पेट पोल्ने, अल्सर जस्ता रो’गपनि देखिन सक्छ ।
खाली पेटमा केरा खानु हुँदैन । बिहानै केरा खानु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट राम्रो नहुने चिकित्सक बताउँछन् । बिहानै खालीपेटमा सेवन गरेको केराबाट हाम्रो शरीरमा म्या’ग्निसियमको मात्रा दुई गुणा बढ्छ र शरीरमा रहेको क्या’ल्सियमसँग रासायनिक प्रतिक्रिया सुरु हुन्छ । परिणामस्वरुप पेट फुल्ने, ढु’स्स हुने, ढ्या’उ आउने, अ’पच हुने तथा ए’सिडीटि बढ्ने जस्ता समस्या देखिन्छ। गोलभेंडा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक नै हुन्छ । फेसमा का’न्ति ल्याउन समेत यसको प्रयोग हुन्छ । तर तपाईलाई थाहा छ ? एकबिहानै खाली पेटमा गोलभेंडा खाँदा यसमा हुने अम्लले पेटमा रहेको ग्या’स्ट्रोइंटस्टाइनल ए’सिडसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छ ।
परिणामस्वरुप पेट दुख्ने, ग्यास्टिक हुने, पेट पोल्ने, बा’न्ता हुने, प’त्थरीको संभावना बढ्ने हुन्छ ।आली पेटमा औ’षधी खाँदा उत्तिकै हो’सीयार हुनुपर्छ । औ’षधिमा रहेको तत्व शरीरभित्र रहेका तत्त्वहरुसँग सिधै मिलेर रा’सायनिक प्रतिक्रिया दिँदा ठूलै स’मस्या नि’म्तन्छ । केहि औ’षधी छोडेर प्राय औ’षधी डाक्टरले पनि खाना खाएपछि खानको लागि भन्नुको कारण पनि यहि नै हो ।रो’ग वि’सेक पार्न खाएको औ’षधीले अरु रो’ग ननिम्त्याउन सक्छ ।खाली पेटमा सोडा खाँदा पनि उत्तिकै ज’टिल स’मस्या देखिन्छ ।सोडा खाँदा पेटको अम्लसँग मिलेर राशायनिक प्रतिक्रिया सुरु हुन्छ र पेट दुख्ने स’मस्या बढ्छ ।
पेट फू’ल्ने, पेट पो’ल्ने, दि’सा लागेजस्तो हुने, छाति पो’ल्ने हुनसक्छ ।स’खरखण्डमा प्रशस्त प्रोटिन पाईन्छ । तर खाली पेटमा यसको से’वन राम्रो नहुने चिकीत्सकको भनाई छ । यसमा अधिक मात्रामा हुने प्रोटिनले ग्या’स्ट्रिकको स’मस्या बढ्छ ।परिणामस्वरुप पेट पो’ल्ने, पेट दु’ख्ने, ज’लन र पेट फु’ल्ने स’मस्या हुन्छ ।खाली पेटमा अ’ल्कोहल खानु पनि वि’ष सरह हुन्छ । यो कुरा विभिन्न अनुसन्धानले पनि देखाएका छन् । अझै घरेलु म’दिराको से’वनले मानिसको मृ’त्यु समेत हुनसक्छ । त्यसैले चिकित्सक भन्छन्, बिहान केही नखाइकन अ’ल्कोहलजन्य पदार्थ नखानूस् ।
खाली पेटमा कहिले पनि चिसो पे’य पदार्थ पिउनु हुँदैन । खाली पेट चिसो पेय पिउनाले पाचन क्रि’यालाई सु’स्त बनाउँछ । यस्ता पदार्थमा हुने कार्बोनेट ए’सिड र पेटको ए’सिडसँग मिसिँदा ग’म्भीर स’मस्या नि’मित्न सक्छ । पेटमा ग्यास भरिने, वा’कवाकि हुने, वा’न्ता हुने, अ’सहज हुने आउने जस्ता स’मस्या हुन्छ ।खाली पेटमा अमिलो फल खानु पनि हा’निकारक हुन्छ । जस्तै सुन्तला, कागती, अम्बा, अचार, लप्सी आदि फल खाली पेट खानु हुँदैन । अंगुर, आँप तथा अ’मिलोयुक्त फलफूलले पेटमा ए’सिड बन्छ ।
किन झ’र्छ कपाल ? यस्तो छ डा. सञ्जुबाबु श्रेष्ठले दिएको सुझाव
सानै उमेरमा किन चा’उरिन्छ छाला ? यसरी गर्नुहोस् हेरचाह
जस्तो सुकै मोटा व्यक्तिहरुलाई पनि काम लाग्न सक्छ तौल घटाउने यी ५ उपाय !